Ukubalwa komthamo we-insulin: kanjani ukukhetha ilungelo likashukela? > Insulin
Ukubalwa komthamo we-insulin eluhlobo 2 sikashukela
Ukubalwa komthamo we-insulin kuyingxenye ebalulekile yokwenza ukwelashwa kwe-insulin okwanele kwesifo sikashukela sezinhlobo zokuqala nesesibili.
Ukubonakaliswa okuyinhloko kwezinqubo ze-pathological kukhona kuhlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela - ukungabikho okuphelele kokuqashelwa kwe-hormone insulin, ebhekene nokulawula amazinga kashukela egazini futhi ikhiqizwa yi-pancreas, futhi ngohlobo lwe-2 isifo sikashukela - ukuthuthukiswa kokungaxineki kwamangqamuzana nezicubu kuma-hormone akhiqizwa okwehlisa ushukela.
Kungakho kubaluleke kakhulu ukubala ngokunembile umthamo we-insulin olungiselelwe kuwo womabili amacala okuqala nawesibili.
Umbuzo wokuthi ungayikhetha kanjani efanele, ubale umthamo we-insulin, nokuthi yini edingekayo kulokhu, uthokozisa cishe wonke umuntu onesifo sikashukela?
Yiziphi izinhlobo zemithi yesimanje?
Ukuthuthukiswa kobuchwepheshe besimanje bioengineering kuvumela ukuthola inani elikhulu lamalungiselelo we-insulin ngaphansi kwezimo zezimboni.
Ukuthola izidakamizwa eziqukethe i-insulin, kuye kwasungulwa izindlela ezikhethekile zokukhiqiza.
Ikhwalithi nobumsulwa be-insulin ekhiqizwa ngokungemthetho kuncike kubuchwepheshe obusetshenzisiwe ekwakhekeni kwayo.
I-pharmacology yanamuhla iyakwazi ukuthola i-insulin yezidakamizwa i-hormonal isebenzisa izindlela ezimbili eziyisisekelo.
umuthi wokwenziwa, otholakala ngenxa yobuchwepheshe besimanje,
umuthi otholakala inqubo yokuhlanganisa ama-pancreas ezilwane (awusetshenziswa kaningi emikhakheni yezokwelapha yesimanje futhi uyinqaba yeminyaka edlule).
Izidakamizwa zokwenziwa kwemithi zihlukaniswe izigaba ezimbalwa eziphambili, ezibalulekile uma usebenzisa enye yezinhlobo zokwelashwa.
I-insulin emfishane futhi emfishane esebenza ibanga layo, elibonisa umsebenzi wayo ngaphakathi kwemizuzu engama-20 ngemuva komjovo. Imithi enjalo ifaka i-Actrapid, i-Humulin-Administrator ne-Insuman-evamile. Imithi i-soluble futhi ingeniswa emzimbeni ngemijovo engabonakali. Imijovo ye-intramuscular noma ye-intravenous kwesinye isikhathi isetshenziswa. Umsebenzi omkhulu wesidakamizwa esikhokhelwayo uqashelwa amahora angama-2-3 ngemuva kwenqubo. Faka lolu hlobo lwemithi equkethe i-insulin ukuze unciphise ushukela wegazi ku-plasma yegazi okubangelwa ukwephulwa kokudla okunconyiwe noma ukushaqeka okuqinile ngokomzwelo.
Imithi yesikhathi sokuvezwa okuphakathi. Izidakamizwa ezinjalo zithinta umzimba kusuka emahoreni angama-15 kuye kwangama-24, ngakho-ke kwanele ukuthi iziguli ezinesifo sikashukela zenze imijovo emi-2 ngosuku.
Imithi esebenza isikhathi eside. Isici sabo esiyinhloko ukuthi umphumela ngemuva komjovo uzibonakalisa isikhathi eside - kusuka emahoreni angama-20 kuye kwangama-36. Isenzo se-insulin emzimbeni wesiguli siqala ukuvela amahora amaningi ngemuva komjovo. Imvamisa, odokotela banikeza lolu hlobo lomuthi ezigulini ezinokuzwa okunciphile kwe-hormone.
Udokotela oholayo kuphela ongabeka umuthi ofanele kudokotela, ngakho-ke kunzima ukwahlulela ukuthi iyiphi i-insulin engcono. Ngokuya ngobunzima benkambo yesifo, isidingo sehomoni kanye nezinye izinto, kukhethwe umuthi ofanele wesiguli.
Ngaphezu kwalokho, uchwepheshe wezokwelapha uzokwazi ukukutshela kalula konke ngesifo sikashukela, imithamo ye-insulin, izinkinga, indlela yokwelashwa nezingxenye zesinkwa.
Ungasibala kanjani isibalo semijovo esebenzayo?
Ngaphambi kokukhetha umthamo we-insulin, wonke umuntu onesifo sikashukela kufanele abhekane nomqondo onjengamayunithi esinkwa sikashukela.
Ukusetshenziswa kwabo namuhla kwenza lula ukubalwa kwe-insulin. Iyunithi elilodwa lesinkwa (nge-1 heh) lilingana namagremu ayishumi emikhiqizo ye-carbohydrate. Ukuze uyihlukanise, kungahle kudinge inani elihlukile lemijovo yomjovo we-insulin.
Kuyadingeka ukukhetha umthamo uthatha isikhathi sesikhathi, ukudla okudliwayo, ngoba izinga lomsebenzi womzimba womuntu ngezikhathi ezihlukile zosuku luhluke kakhulu. Ngaphezu kwalokho, ukucasulwa kwensiza yesiqhingi se-pancreas kwenzeka ngezindlela ezihlukile, lezi yizinguquko okuthiwa zibizwa ngokuthi yi-circadian changes.
Kufanele kukhunjulwe ukuthi ekuseni, iyunithi elilodwa lesinkwa lizodinga amayunithi amabili e-hormone, ngesikhathi sokudla kwasemini - munye, futhi kusihlwa - esisodwa nesigamu.
Ukuze ukubala kahle umthamo wamayunithi we-insulin wokuvezwa okufushane, kuyadingeka ukulandela i-algorithm ecacile yesinyathelo (kukhona itafula elikhethekile lohlobo 2 sikashukela).
Ukwelashwa kwe-insulin kunikeza imithetho enjalo eyisisekelo kanye nemigomo yomthamo we-insulin:
Inani lamakhalori asetshenziswa phakathi nosuku (isilinganiso sansuku zonke). Lesi yisici esiyinhloko okufanele usinake ukuze ukhethe i-insulin efanelekile esebenza ngokubambelela. Inani lama-kilocalories ngosuku anqunywa ngokususelwa ekusebenzeni ngokomzimba kwesifo sikashukela.
Emini, inani layo yonke imikhiqizo esetshenzisiwe ye-carbohydrate akufanele yedlule ama-60% ephelele.
Kusetshenziswa igremu elilodwa lama-carbohydrate, umzimba ukhiqiza ama-kilocalories amane.
Umthamo we-insulin wenziwa ucabanga ngesisindo sikashukela. Ukuze wenze lokhu, kukhona amatafula akhethekile (kanye ne-insulin wokubala online) ekhombisa ukuthi mangaki amayunithi e-insulin okufanele aphathwe njengomjovo ngekhilogremu ngayinye yesisindo seziguli.
Okokuqala, kufanele ukhethe umthamo we-hormone esebenza kancane, bese uyinde.
Iphuzu elibalulekile ukuthi i-endocrinology ayisebenzisi ukubala (kohlobo 1 nohlobo 2 sikashukela) kokusetshenziswa kokudla okuqukethe amaprotheni noma amafutha.
Ngokuya enkambweni ethile yenqubo ye-pathological, umthamo olandelayo we-insulin uyadingeka ngekhilogremu ngayinye yesisindo sikashukela:
ukuvela kwesifo - 0.5 заболевания
isikhathi salokho okubizwa ngokuthi "ukuzola okucatshangwayo" - 0.4ꓼ
ukuthuthukiswa okungapheli kwenqubo ye-pathological - 0,8ꓼ
inkambo yokubola yesifo - 1.0 (esiphezulu - 1.5) ꓼ
isikhathi sokulungiselela - 0.6-0.8ꓼ
ukuthomba ezinganeni zokuthomba - 1.5-2.0.
Ngakho-ke, kufanele kuthathwe i-insulin efushane.
Ngesikhathi sokwelashwa, igazi kufanele linikezwe ukunquma izinga le-glucose futhi, uma kunesidingo, lungisa inani le-insulin nge-1 kg yesisindo.
Ungabalwa kanjani inani lemijovo yesenzo eside?
Ngabe i-insulin ethathe isikhathi eside kufanele isetshenziswe? Le hormone eyandisiwe isetshenziselwa ukwenza i-hyperglycemia ivele ekuseni esiswini esingenalutho. Ukwelashwa kusetshenziswa ngokukhuthele zombili ekwakhiweni kwesifo sikashukela sezinhlobo zokuqala nesesibili (ukwandisa ukuzwela kwamangqamuzana ukuya ku-insulin). Ngasikhathi sinye, into efana nokuthatha i-hormone yokuchayeka okufushane ngaphambi kokudla ayibhekwa. Namuhla, kunezigaba ezintathu zabanesifo sikashukela - lezo ezisebenzisa kuphela i-hormone yokuchayeka isikhathi eside, iziguli ezidinga i-insulin yesikhashana kanye ne-ultrashort isenzo sokunciphisa ushukela we-spikes, kanye neziguli ezingeke zenze ngaphandle kwazo zombili izinhlobo ze-hormone.
Kumele kuqashelwe ukuthi uma umthamo we-insulin enwetshiwe ubalwa ngokungalungile, kuzoba nokungasebenzi kahle ekubalweni kwe-hormone yokuvezwa okufushane ne-ultrashort.
Enye yemigomo eyinhloko okufanele ibhekwe yiziguli ezinesifo sikashukela yindlela yokubala umthamo we-insulin ukuze inani laso ligcine izinga likashukela lingaphansi kwemingcele evamile.
I-insulin yesikhathi eside yesifo sikashukela kufanele ibalwe ngesisekelo sokulandelayo:
Ngosuku olukhethiwe, kufanele weqe ukudla kokuqala - ibhulakufesi, bese uqala ukuthatha izilinganiso zikashukela wegazi kuze kube yisikhathi sasemini sehora ngalinye.
Ngosuku lwesibili, udinga ukudla kwasekuseni, bese ulinda amahora amathathu bese uqala ukukala amazinga kashukela ehoreni ngalinye ngaphambi kokudla. Iphuzu eliyinhloko okufanele licatshangwe ukweqa ukudla kwasemini.
Ngosuku lwesithathu, umuntu onesifo sikashukela angadla ibhulakufesi nangelantshi, kepha weqa isidlo sakusihlwa. I-glucose egazini ilinganiswa phakathi nosuku.
Ngokufanelekile, izinkomba zasekuseni kufanele zibe semikhawulweni ejwayelekile, futhi ukukhula kwazo kuyanda phakathi nosuku kuze kuhlwe. Amacala angenzeka lapho ushukela uphezulu ekuseni (ungawi) kunokuba kusihlwa. Ngemuva kwalokho kuyadingeka ukulungisa inani le-insulin elawulwa.
Kuze kube manje, umgomo wokubala i-Forsy uvame ukusetshenziswa (indlela yokubala kahle i-insulin ngohlobo 1 nohlobo 2 lwesifo sikashukela, ifomula yokubala i-insulin).
Ngaphezu kwalokho, uhlelo olulandelayo lungabhekwa:
ukuphuza ama-hormone nsuku zonke kukhethiwe kungakhathalekile isikhathi sokuvezwa kwayo - ngoba lokhu kuyadingeka ukusebenzisa itafula futhi kuphindaphindwe isisindo sesiguli ngesiciꓼ
khipha inani le-insulin elisebenza okwesikhashana kusuka enkombeni etholakele, njengomphumela lapho kutholakala umthamo owodwa we-hormone wokuvezwa isikhathi eside.
Imininingwane ephelele ephelele yendlela yokubala umthamo we-insulin inganikezwa kuphela udokotela oholayo, kucatshangelwa izici zomzimba wesiguli.
Yiziphi izinhlobo ezahlukahlukene zokukhethwa komthamo?
Kunezinhlobo eziningi zokwelapha i-insulin ezisetshenziswa namuhla.
Uhlobo lwendabuko oluhlanganisiwe. Ukuyisebenzisa, isilinganiso se-insulin sizokwethulwa ngendlela yemijovo yesenzo esifushane nesikhathi eside (ngokwesilinganiso esingama-30 kuye kwangama-70). Izinkomba ezinjalo zibalwa uma kunenkambo engalinganiyo ye-pathology ene-frequency kuzuba kushukela. Izinzuzo eziphambili zalokhu kwelashwa kalula ekutholeni imithamo ye-insulin ngosuku nokulawulwa kwamazinga we-glycemia kathathu ngesonto. Ilungele iziguli esezikhulile nezingane. Ukugwema ukwehla okungazelelwe kwamazinga kashukela, kufanele ulandele ukudla okuqinile.
Uhlobo olunamandla kunzima ukulandela. Ukubala ukuthi mangaki amayunithi we-insulin adingekayo ngosuku, isisindo sesiguli siyabhekelwa bese kusetshenziswa itafula elikhethekile. I-Hormone yesikhathi eside icishe ibe ngu-40-50%, ingxenye (2/3) yayo iphathwa ekuseni, kanye nobusuku obulandelayo. I-insulin esebenza ngokushesha kufanele iphathwe kathathu ngosuku kulesilinganiso - ama-40% ekuseni ngaphambi kokudla, no-30% ngosuku lwasemini nangedina.
Ukwelapha i-insulin yendabuko kwaziwa nangokuthi uhlobo olujwayelekile lomthamo. Uma, ngenxa yezizathu ezithile, isiguli singakwazi ukuqapha ngokuseduze izinga le-glycemia, khona-ke ochwepheshe bezokwelapha batusa ukusebenzisa le ndlela yokwelashwa.
Singakwazi ukwahlukanisa izinzuzo eziphambili ezilandelayo zale nkambo yokwelashwa:
Azikho i-algorithms eziyinkimbinkimbi nokubalwa, ukuthi ungabalwa kanjani umthamo we-insulin.
Iqeda isidingo sezilinganiso ezijwayelekile zokuhlushwa kweglucose.
Ukusuka esigulini, kuleli cala, kuyadingeka kuphela ukugcina kahle yonke imiyalo kadokotela obonayo.
Yini okufanele uyenze uma i-hyperglycemia iziveza?
Ukubonakaliswa kwe-hyperglycemia kudinga izenzo zokulungisa ekwelashweni osekuvele kukhethiwe. Ukuze wenze lokhu, kuyadingeka ukukhipha ukuthi kungenzeka inqubo yokujova engafanele.
I-insulin esebenza isikhathi eside kufanele ifakelwe kuphela esibayeni esingelapheki lehlombe noma ethangeni, futhi i-hormone ebamba ongezansi kufanele ifakwe esiswiniꓼ
I-insulin ebambela amafushane isetshenziswa imizuzu eyishumi nanhlanu kuya kwengamashumi amabili ngaphambi kwesidlo esikhulu
Imithamo yansuku zonke ye-insulin esebenza isikhathi eside (kuze kube amahora ayi-12) ihlukaniswa kabili futhi ihanjiswa kabili ngosuku. Uma umuthi usetshenziswa ngokweqile kwesenzo eside, khona-ke kudingeka umjovo owodwa ngosuku.
Inqubo yomjovo kufanele isuselwe kunqubo yomjovo osheshayo, kepha ukuphatha kancane umuthi ongaphansi kwesikhumba (kuyadingeka ukubala ngokomqondo kuze kufike kweshumi).
Uma inqubo yokubulala yenzeka kahle, kepha ngasikhathi sinye kunokuhlaselwa kwe-glycemia, lesi simo kufanele sixoxwe nodokotela wezokwelapha. Udokotela ohambelayo uzonikeza imithamo eyengeziwe ye-insulin ngosuku. Ngaphezu kwalokho, ukucatshangelwa kokusebenza komzimba kuyiphuzu elibalulekile kuhlobo lwe-1 mellitus yesifo sikashukela.
Ungawubala kanjani umthamo we-insulin uzotshela uchwepheshe kuvidiyo ekulesi sihloko.
Izizathu zokwelashwa ngomjovo we-hormonal
Uma ucabanga ngakho, ekuqaleni akucaci ukuthi kungani kufakwa imijovo ye-hormonal kuma-diabetes. Inani le-hormone enjalo emzimbeni womuntu ogulayo ngokujwayelekile ngokwemvelo, futhi kaningi lidlulwa ngokweqile.
Kepha lolu daba luyinkimbinkimbi ngokwengeziwe - lapho umuntu enesifo “esimnandi”, amasosha omzimba athinta amaseli we-beta womzimba womuntu, amanyikwe, abhekene nokukhiqizwa kwe-insulin. Izinkinga ezinjalo zenzeka hhayi nje kwabanesifo sikashukela sohlobo lwesibili, kodwa nakwezokuqala.
Ngenxa yalokhu, inani elikhulu lamaseli we-beta liyafa, okwenza buthaka kakhulu umzimba womuntu.
Uma sikhuluma ngezimbangela zephethri, ukuthi lokhu kuvame ukubangelwa ukukhuluphala, lapho umuntu engadli kahle, ehamba kancane futhi indlela yakhe yokuphila ingabizwa ngokuthi iphilile. Kuyaziwa ukuthi inani elikhulu labantu asebekhulile nabaneminyaka ephakathi bahlushwa isisindo ngokweqile, kepha akubona bonke abathintwa yisifo “esimnandi”.
Manje kungani kwesinye isikhathi umuntu ethinteka yi-pathology, futhi kwesinye isikhathi angabi nayo? Lokhu kubangelwa ikakhulu ukuqagelwa kohlobo lohlobo lofuzo, ukuhlaselwa kwe-autoimmune kungaba kubi kakhulu kangangokuba imijovo ye-insulin kuphela engasiza.
Izinhlobo ze-insulin ngesikhathi sesenzo
Iningi le-insulin emhlabeni likhiqizwa ezitshalweni zemithi lisebenzisa ubuchwepheshe bobuchwepheshe bofuzo. Uma kuqhathaniswa namalungiselelo aphelelwe yisikhathi wemvelaphi yezilwane, imikhiqizo yanamuhla ibonakala ngokuhlanzwa okuphezulu, ubuncane bemiphumela emibi, kanye nomphumela ozinzile, ongabikezelwa. Manje, ekwelashweni kwesifo sikashukela, kusetshenziswa izinhlobo ezi-2 ze-hormone: ama-analogia womuntu ne-insulin.
I-molecule ye-insulin yabantu iyiphinda ngokuphelele i-molecule ye-hormone ekhiqizwa emzimbeni. Lokhu kuyimikhiqizo ethatha isikhathi esifushane; ubude bawo abudluli amahora angama-6. Isikhathi esiphakathi se-NPH insulin nazo zingokweli qembu. Banesikhathi eside sokusebenza, cishe amahora ayi-12, ngenxa yokungezwa kweprotheni yeprotheni kulo muthi.
Isakhiwo se-insulin sehlukile nge-insulin yabantu. Ngenxa yezimpawu ze-molecule, le mithi ingasinxephezela kangcono isifo sikashukela. Lokhu kufaka phakathi ama-ultrashort agents aqala ukunciphisa ushukela imizuzu eyi-10 ngemuva komjovo, osebenza isikhathi eside no-Ultra, esebenza usuku nosuku kuya emahoreni angama-42.
Uhlobo lwe-insulin Isikhathi somsebenzi Imithi Ukuqokwa
Amafushane e-Ultra Ukuqala kwesenzo kungemva kwemizuzu engu-5-15, umphumela omkhulu ngemuva kwamahora ayi-1.5. I-Humalog, Apidra, NovoRapid Flexpen, i-NovoRapid Penfill. Faka isicelo ngaphambi kokudla. Zingakwazi ukwengeza ushukela wegazi ngokushesha. Ukubalwa komthamo kuya ngenani lama-carbohydrate anikezwe ngokudla. Ibuye isetshenziswe ukulungisa ngokushesha i-hyperglycemia.
Kafushane Kuqala ngesigamu sehora, inani eliphakeme liwela emahoreni ama-3 ngemuva komjovo. I-Actrapid NM, i-Humulin ejwayelekile, i-Insuman Rapid.
Isenzo esiphakathi Isebenza amahora ayi-12-16, inani eliphakeme - amahora angama-8 ngemuva komjovo. I-Humulin NPH, Protafan, Biosulin N, Gensulin N, Insuran NPH. Kusetshenziselwa ukwenza ushukela ojwayelekile abe ngokwejwayelekile. Ngenxa yesikhathi sokusebenza, angalayishwa izikhathi eziyi-1-2 ngosuku. Umthamo ukhethwe udokotela ngokuya ngesisindo sesiguli, isikhathi sesifo sikashukela kanye nezinga lokukhiqizwa kwama-hormone emzimbeni.
Kuhlala isikhathi eside Isikhathi singamahora angama-24, akunakuphikwa. I-Levemir Penfill, i-Levemir FlexPen, iLantus.
Isikhathi eside Isikhathi somsebenzi - amahora angama-42. UTnowba Penfill Yisifo sikashukela sohlobo 2 kuphela. Isinqumo esihle kunazo zonke ezigulini ezingakwazi ukuzenzela ngokwazo.
Ukwelashwa kwe-insulin ngesifo sikashukela, ukukhulelwa nezingane: izinkinga, izinkomba, irejimeni
Izinkomba zokusebenzisa i-insulin
Ungayenza kanjani inqubo yohlobo lwe-insulin yohlobo 1 nesifo sikashukela sohlobo 2?
Isiko Lendabuko ne-Baseline Bolus Insulin Therapy
Ukwelashwa kwe-insulin ezinganeni
Ukwelashwa kwe-insulin ngesikhathi sokukhulelwa
Izinkinga ezingaba khona nokuvinjwa kwazo
Enye yezindlela eziholela zokwelapha isifo sikashukela ukwelashwa kwe-insulin. Ikuvumela ukuthi uthuthukise kakhulu isimo sezempilo sesifo sikashukela (kufaka nengane), ukukhipha ukuthuthukiswa kwezinkinga. Ukuze ukwelashwa okunjalo kube okulungile, kufanele ufunde konke mayelana nezinkomba ezisetshenziswayo, ama-nuances wokwenza irejimeni yokwelashwa, imithetho yokujova nokunye okuningi.
Izinkomba zokwelashwa kwe-insulin ziwuhlobo 1 sikashukela, i-ketoacidosis, ne-hyperosmolar yesifo sikashukela ne-hyperlacticemia coma. Lolu hlu luqukethe:
ukukhulelwa nokuzalwa esikhathini esizayo okuhambisana nesifo sikashukela,
ukubuyiswa okukhulu kwesifo sikashukela sohlobo 2,
ubuncane besilinganiso sokusebenza ekwelapheni lesi sifo ngenye indlela,
ukwehla okukhulu kwesisindo somzimba.
Enye inkomba kufanele ibhekwe njengesifo sikashukela kunoma yisiphi isigaba. Ukuze ukwelashwa kube okulungile, kubalulekile ukudweba uhlobo lonyango ngokufanele.
Idizayini yokwelashwa kwe-insulin kufanele ibe ngaphansi kwama-nuances amaningi.
Kuyadingeka ukuhlanganisa ngekhono irejimeni yokwelashwa kwe-insulin, ukubalwa okuyikho komthamo kubalulekile kususelwa eminyakeni yesifo sikashukela, ukungabikho noma ukuba khona kwezinkinga, "isigaba" sesi sifo.
Uma sikhuluma ngenqubo yezinyathelo nezinyathelo, kufanele kubukeke kanjena: kuyadingeka ukuthola ukuthi ukujova isikhathi eside kwe-insulin kuzodingeka ebusuku, uma kunesidingo, kunengqondo ukubala inani lokuqala, elizolungiswa kamuva.
Okulandelayo, banquma ngokululeka kokusebenzisa i-insulin enwetshiwe ekuseni - lesi yisigaba esinzima kunazo zonke, lapho uzodinga ukweqa isidlo sasekuseni kanye nesasemini.
Ukuze ukwelashwa kwe-insulin kohlobo lwe-2 yesifo sikashukela kusebenze, kuyadingeka ukulungisa umthamo we-insulin enwetshiwe ngesonto elizayo kuze kube yilapho kufinyelelwa isilinganiso esifanele.
Ngaphezu kwalokho, ngemuva kokubonisana nodokotela oyi-endocrinologist, kubalulekile ukunquma isidingo sokusetshenziswa kwengxenye ye-hormonal ngaphambi kokudla nama-dosage ngqo. Futhi, ukwelashwa kwe-insulin yohlobo 1 sikashukela kusho:
ukubalwa kwenani lokuqala le-insulin emfushane noma ye-ultrashort ngaphambi kokudla nokulungiswa okwalandela kwesilinganiso,
ukuzama kokuzama ukuthi kudinga imizuzu emingaki ngaphambi kokudla isakhi sehomoni,
ukubalwa okulungile kwe-insulin emfushane noma ye-ultrashort ezimweni lapho kubalulekile ukuguqula ushukela wegazi ukwenyuka isikhathi eside.
Imithetho ethize yokuqondisa i-hormonal element incike ekutheni ipampu iyasetshenziswa noma, ngokwesibonelo, inqubo yenziwa ngesandla. Izimiso zokwelashwa kwe-insulin zilula kakhulu: inani elinqunywe kusengaphambili lale ngxenye lelethwa ngesikhathi esimisiwe sosuku.
Uma lokhu kungeyona i-pump-action insulin therapy, lapho-ke sikhuluma ngeqiniso lokuthi i-hormone ifakwa ngaphansi kwesikhumba ibe izicubu ezinamafutha. Ngaphandle kwalokho, umuthi ngeke ube nomphumela oyifunayo.
Isingeniso singenziwa esifundeni samahlombe noma kwi-peritoneum, ngaphambili elingaphambili lethanga noma isibaya esingaphandle sezinkinobho.
Indawo yomjovo ishintshwa nsuku zonke, ngaphandle kwalokho kungaba nemiphumela eminingana: ushintsho ngekhwalithi yokufakelwa kwe-hormone, ushintsho kushukela wegazi. Ngaphezu kwalokho, imithetho ayibandakanyi ukuqaliswa kwemijovo ezindaweni eziguquliwe, ngokwesibonelo, ngamabala, izibazi, ama-hematomas.
Ukuphatha ngqo umuthi usebenzisa isirinji ejwayelekile noma ipeni-syringe. Imithetho yokwelashwa kwe-insulin imi ngale ndlela elandelayo:
indawo yomjovo iphathwa ngamawashi amabili afakwe otshwaleni. Omunye wabo uphatha indawo enkulu, owesibili uhlinzeka ngamagciwane endaweni yomjovo,
Kuyadingeka ukulinda cishe imizuzwana engama-30 kuze kuphume utshwala,
ngesandla esisodwa, kwakheka isibambo samafutha angaphansi, ngesinye isandla, kufakwa inaliti engxenyeni yomphetho engela ngamazinga angama-45,
Ngaphandle kokukhulula ama-folds, kuzodingeka ucindezele i-piston yonke indlela bese wethula isakhi sehomoni. Kungemva kwalokhu kuphela lapho isipetu sikhishwa bese kuthi isikhumba sikhishwe.
Kwabanesifo sikashukela sohlobo lwesibili nolokuqala, ukuxuba noma ukufaka izinhlobo ezahlukene ze-insulin kungabaluleka. Kulokhu, ukuze ugcotshwe amahlandla ayi-10, kuyadingeka ukusebenzisa ingxenye eyodwa yezidakamizwa nezingxenye eziyisishiyagalolunye ze- “solvent”. Ukuze uthole i-dilution izikhathi ezingama-20 kusebenza ingxenye eyodwa ye-hormone nezingxenye eziyi-19 ze "solvent".
Kuvunyelwe ukumanzisa i-insulin nge-saline yomzimba noma ngamanzi ancishisiwe. Ukusetshenziswa kwamanye uketshezi kudangele kakhulu. Kuvunyelwe ukushela uketshezi olwethulwe ngokuqondile kwisirinji noma esitsheni esihlukile ngaphambi kokuphathwa.
Ukwelashwa kwendabuko nokuyisisekelo okuqukethe isakhi sehomoni kunikezwe. Esimweni sokuqala, sikhuluma ngeqiniso lokuthi i-insulin esebenza isikhathi eside iphathwa kabili ngosuku (ekuseni nasebusuku), kanti nengxenye efingqiwe ingaphambi kokudla kwasekuseni nangesikhathi sokudla, noma ngaphambi kokudla okukhulu.
Kodwa-ke, umthamo wokugcina kufanele ulungiswe, okungukuthi, isilinganiso se-insulin kanye nenani le-XE kuphela ngeke liguqulwe yisifo sikashukela kuphela. Inzuzo yale nqubo ukuntuleka kwesidingo sokunquma i-glycemia ngaphambi kokudla kokudla.
Izinkomba zokwelashwa kwe-insulin yohlobo 2 sikashukela mellitus
Udokotela ngamunye we-endocrinologist kusukela ngesikhathi sokuxilongwa “uhlobo 2 sikashukela” kufanele azise iziguli zakhe ukuthi ukwelashwa kwe-insulin namuhla kungenye yezindlela eziphumelela kakhulu zokwelashwa. Ngaphezu kwalokho, kwezinye izimo, ukwelashwa kwe-insulin kungaba ukuphela kwendlela okungenzeka, eyanele yokufeza i-standardoglycemia, okungukuthi, isinxephezelo sesifo.
Abazijwayele i-insulin. Ungacabangi ukuthi ngokushintshela kumijovo ye-insulin, ngokuzayo uzothola isimo “sokuncika kwe-insulin”. Enye into, ngesinye isikhathi imiphumela emibi noma ubunzima bezinkinga ze-insulin zingabonakala, ikakhulukazi ekuqaleni.
Indima ehamba phambili ekuthatheni isinqumo ngokuqokwa kwe-insulin therapy kufanele idlale imininingwane emandleni okubekelwa kwe-beta-cell of gland. Kancane kancane, njengoba uhlobo 2 lwesifo sikashukela luqhubeka, ukukhula kwe-beta-cell kukhula, kudinga ukushintshwa ngokushesha ekwelashweni kwe-hormone. Imvamisa, kuphela ngosizo lokwelashwa kwe-insulin okungafinyelela futhi kulondolozwe izinga elidingekayo le-glycemia.
Ngaphezu kwalokho, ukwelashwa kwe-insulin yohlobo 2 lwesifo sikashukela kungadingeka isikhashana okwesikhashana ezimeni ezithile zomzimba nezomzimba. Lezi yizimo lapho kudinga khona ukwelashwa kwe-insulin yesifo sikashukela sohlobo 2.
Izinkinga ezinkulu ze-macrovascular, ezifana ne-myocardial infarction kanye nesifo sohlangothi,
Ukuntuleka kwe-insulin okubonakalayo njengokwehla kwesisindo okuqhubekayo kanye nokudla okujwayelekile, ukuthuthukiswa kwe-ketoacidosis,
Izifo ezahlukahlukene ezithathelanayo futhi ngaphezu kwakho konke, i-purulent-septic emvelweni,
Izinkomba ezingezinhle zezindlela ezahlukahlukene zokucwaninga zokuxilonga, isibonelo:
ukulungiswa kwezinga eliphansi le-C-peptide kanye / noma i-insulin ekujuleni kwegazi.
ukuzindla okuphindaphindwe kokuzila ukudla kwe-hyperglycemia ezimweni lapho isiguli sithatha izidakamizwa ze-hypoglycemic yomlomo, sibona ukubusa kokuzivocavoca umzimba nokudla.
i-glycosylated hemoglobin engaphezulu kwe-9.0%.
Izinto 1, 2, 4, no-5 zidinga ukuguqulwa kwesikhashana kwe-insulin. Ngemuva kokuzinza noma ukulethwa, i-insulin ingakhanselwa.
Esimweni se-glycosylated hemoglobin, ukuphathwa kwayo kufanele kuphindwe ngemuva kwezinyanga eziyi-6. Uma phakathi nalesi sikhathi sesikhathi amazinga akhe ehla ngaphezu kwe-1.5%, ungasibuyisela isiguli ukuthi sithathe amaphilisi anciphisa ushukela, futhi senqabe i-insulin.
Uma ukwehla okuphawulekile kwenkomba kungabhekwa, ukwelashwa kwe-insulin kuzodingeka ukuthi kuqhubeke.
Isu lokwelashwa lokudlondlobala kwesifo sikashukela sohlobo 2 Ngokukhula kwesifo sikashukela sohlobo 2, ukwehluleka kwe-beta kwe-pancreatic okuqhubekayo kuyavela, ngakho-ke i-insulin ukuphela kwendlela yokwelapha engalawula ushukela wegazi kulesi simo.
Cishe i-30-40% yeziguli ezinesifo sikashukela sohlobo lwe-2 zidinga ukwelashwa kwe-insulin unomphela kokulawulwa kwe-glycemic okuqhubekayo, noma kunjalo, akuvame ukubekwa ngenxa yokukhathazeka okuthile kwazo zombili iziguli nodokotela.
Ukuphathwa kokuqala kwe-insulin lapho kukhonjwe kubaluleke kakhulu ekunciphiseni izehlakalo zokuphazamiseka kwesifo sikashukela, kubandakanya i-retinopathy, i-neuropathy kanye nephropathy. I-Neuropathy iyimbangela eyinhloko yokuqunjelwa okungahambi kambi ezigulini, i-retinopathy iyimbangela ehamba phambili yobumpumputhe, futhi i-nephropathy iyisici esiyinhloko esiholela ekwehlulekeni kwe-renal.
Ucwaningo lwe-UKPDS oluzoba yisifo sikashukela (i-UKPDS) kanye nesifundo seKumamoto sikhombisile imiphumela emihle yokwelashwa kwe-insulin ekwehliseni ubunzima be-microvascular, kanye nomkhuba ophinyiselwe ekufezeni phambili i-prognosis wezinkinga ezinkulu ze-macrovascular.
Ucwaningo lwe-DECODE luhlole ubudlelwano phakathi kokushona okuphelele kanye ne-glycemia, ikakhulukazi i-postprandial. Ocwaningweni ngokulawulwa kwesifo sikashukela kanye nezinkinga zaso (DCCT) zesifo sikashukela sohlobo 1, kuchazwa amazinga aqinile wokulawulwa kwe-glycemic.
I-American Association of Clinical Endocrinology (AACE) kanye ne-American College of Endocrinology (ACE) isetha iHbA1c njengethagethi engu-6.5% noma ngaphansi, futhi ishesha amazinga e-glycemia ka-5.5 no-7.8 mmol / L we-postprandial glycemia (ngokusebenzisa 2 amahora emva kokudla).
Kaningi, lezi zinhloso kunzima ukufezekisa nge-monotherapy yomlomo, ngakho-ke ukwelashwa kwe-insulin kudingekile. Cabanga ngamathuba wokunquma i-insulin njengokwelashwa kokuqala kwazo zonke iziguli ezinesifo sikashukela sohlobo 2.
Kuyaziwa ukuthi ubuthi be-glucose kungenzeka bube yisici ekunqumeni ubunzima bokuthola ukulawula okwanele kwe-glycemic. Ukwelashwa kwe-insulin cishe njalo kulawula ubuthi be-glucose.
Njengoba umphumela onobuthi we-glucose udaluliwe, isiguli singakwazi ukuqhubeka nokusebenzisa i-insulin mototherapy, noma sishintshe sihlanganise ukwelashwa kwe-insulin ngokuhlangana namaphilisi anciphisa ushukela, noma ku-monotherapy yomlomo.
Ukwehluleka ukuhambisana nokulawulwa okuqinile ku-mellitus yesifo sikashukela kuholela ekwandeni kwengozi yezinkinga ngokuzayo, ngaphezu kwalokho, kukhona imibono kanye namaqiniso akhombisa ukuthi ukulawulwa okufika ngesikhathi nangesikhathi esizayo kuqinisekisa ukusebenza kahle kwezokwelapha esikhathini esizayo ngokuya ngokuthola ukulawula okungcono.
Kunezindlela ezimbili zokwelashwa kwe-insulin: zendabuko nenamandla. Owokuqala uhlanganisa imithamo ye-insulin engapheli, ebalwa ngudokotela. Elesibili lifaka imijovo eyi-1-2 yenani elikhethwe ngaphambilini lehomoni ende futhi eminingana - elifushane, elibalwa ngaso sonke isikhathi ngaphambi kokudla. Ukukhetha kwama-regimen kuncike ebukhali balesi sifo kanye nokuzimisela kwesiguli ukulawula ushukela wegazi ngokuzimele.
Umthamo we-hormone obalwa nsuku zonke uhlukaniswe izingxenye ezimbili: ekuseni (2/3 yenani) nakusihlwa (1/3). I-insulin emfushane ingama-30- 40%. Ungasebenzisa izingxube ezenziwe ngomumo lapho i-insulin efushane ne-basal ihlanganiswe khona njenge-30: 70.
Izinzuzo zombuso wendabuko ukungabi bikho kwesidingo sokusebenzisa ama-algorithms wezibalo zansuku zonke, izilinganiso zeglucose ezingadingekile, njalo ezinsukwini eziyi-1-2. Ingasetshenziswa kwiziguli ezingakwazi noma ezingathandi ukulawula ushukela wazo njalo.
Okubi kakhulu kwirejimeni yendabuko ukuthi umthamo nesikhathi sokuphuza i-insulin emijozweni akuhambelani nokwakheka kwe-insulin kumuntu ophilile. Uma i-hormone yemvelo igcotshwa ukuze kudle ushukela, khona-ke yonke into iyenzeka ngenye indlela: ukufinyelela i-glycemia ejwayelekile, kufanele uguqule indlela odla ngayo nenani le-insulin elifakiwe.
Ngenxa yalokhu, iziguli zibhekene nokudla okuqinile, ukuphambuka ngakunye lapho kungahle kube nomphumela we-hypoglycemic noma hyperglycemic coma.
Ukwelashwa kwe-insulin okujulile kwaziwa njengendawo yohlobo lwe-insulin ehamba phambili kakhulu. Ibizwa nangokuthi yi-basal bolus, njengoba ingalingisa zombili njalo, i-basal, secretion yama-hormone, ne-bolus insulin, ekhishwe ngokuphendula ukwanda kweglucose yegazi.
Inzuzo engenakuphikwa yalombuso ukuswela ukudla. Uma isiguli esinesifo sikashukela sesikwazi imigomo yokubala okufanele umthamo nokulungiswa kwe-glycemia, singadla njenganoma yimuphi umuntu ophilile.
Imijovo edingekayo Uhlobo lwehomoni
Ngaphambi kwesidlo sasekuseni
Alukho uhlobo oluthile lwe-insulin olucacisiwe nsuku zonke, lushintsha nsuku zonke ngokuya ngezici zokudla, izinga lomsebenzi womzimba, noma ukwanda kwezifo ezihambisanayo. Akukho mkhawulo ophezulu enanini le-insulin, umbandela oyinhloko wokusebenzisa umuthi kahle yizibalo ze-glycemia.
Iziguli ezinesifo sikashukela ezigula kakhulu kufanele zisebenzise imitha izikhathi eziningi phakathi nosuku (cishe ngo-7) futhi, ngokususelwa kwidatha yokulinganisa, zishintshe umthamo olandelayo we-insulin.
Ucwaningo oluningi lufakazele ukuthi i-standardoglycemia kwisifo sikashukela ingatholakala kuphela ngokusetshenziswa kakhulu kwe-insulin. Ezigulini, i-glycated hemoglobin iyancipha (7% qhathanisa ne-9% kwimodi yendabuko), amathuba we-retinopathy ne-neuropathy ancishiswa ngo-60%, kanti izinkinga ze-nephropathy nezenhliziyo cishe zingama-40%.
Kwamukelekile ukufaka amaphilisi ngomjovo
Kunezinketho eziningi zemijovo ye-insulin, ngayinye enamanani amaningi.
Ithebula No. 1. Izinhlobo zezimali zokujova kwe-insulin
Ngaphambi kokuphendula lo mbuzo, kudingeka wazi ukuthi yimaphi amaphilisi angafanelekile kwabanesifo sikashukela nokuthi angakanani asengozini. Uma ziyingozi, khona-ke awukwazi ukuzithatha futhi izinga likashukela alinakwa.
Kuyadingeka ukusebenzisa imijovo, uma konke kwenziwa kahle, khona-ke impilo yomuntu ingandiswa kakhulu. Ngokusetshenziswa kwamaphilisi alimazayo, isimo somuntu siba sibi, yize izinga likashukela lincipha isikhashana.
Ezinye iziguli kuqala zidla ukudla okuqinile okunama-carbohydrate angaphansi. Futhi abaningi basebenzisa i-metamorphine yezidakamizwa.
Ngomjovo we-hormonal, kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi izinga kashukela kwesinye isikhathi lidlula inani elivumelekile, yize umuntu engaphuli ukudla okuqinile futhi ephula umthamo ophathwe ne-insulin. Kusho ukuthi kunzima kuma-pancreas ukubhekana nomthwalo osindayo, khona-ke kuyadingeka ukwengeza ngokucophelela imithamo ye-insulin ukuze izinkinga zesifo sikashukela zingakhuli.
Izinkomba ezinjalo ezimbi zokuqukethwe ushukela zivame ukubonwa ekuseni, esiswini esingenalutho. Ukulungisa isimo ngokujwayelekile, udinga ukudla kwakusihlwa kusenesikhathi, kungakapheli iminyaka eyi-19.
00, nangaphambi kokuba uyolala, jove inani elincane lezinto. Ngemuva kokudla ngakunye, ngemuva kwamahora ambalwa, udinga ukushintsha amazinga kashukela.
Uma ngalesi sikhathi iphakanyisiwe kancane, khona-ke lokhu akubalulekanga. Imijovo ye-Ultrashort phakathi kokudla izosiza.
Nakulokhu futhi, kufanele kushiwo ngokubaluleke kakhulu - into yokuqala umuntu ogulayo ahlala kuyo ekudleni okuqinile ngenani eliphansi lama-carbohydrate, bese ukusetshenziswa kwe-metamorphine ngokulinganisela kuyaqala. Uma izinkomba zikashukela zikhuphuka, akufanele ungabaze, kodwa sebenzisa imijovo ye-hormonal.
Uma umuntu eqala imijovo, ukudla kufanele futhi kubhekwe ngokuqinile, futhi ukunakwa okukhethekile kufanele kukhokhwe ezingeni le-glucose, kufanele kube okufanayo nakubantu abaphilile.
Ngaphansi kwethonya lejusi esiswini emzimbeni, i-insulin iyachithwa, i-hydrochloric acid nama-enzyme wokugaya kufanele asolwe ngalokhu. Naphezu kwezinga eliphakeme lokuthuthukiswa kwe-pharmacology yesimanje, okwamanje azikho izibhebhe ezinomphumela omuhle kakhulu. Futhi ngisho nocwaningo olusebenzayo kule ndawo olwenziwa yizinkampani ezenza imithi alwenziwa.
Imakethe yezokwelapha inikezela ukusetshenziswa kwe-aerosol yohlobo lwe-inhalation, kepha ukusetshenziswa kwayo kuhlotshaniswa nobunzima obuthile - umthamo kunzima ukubala, ngakho-ke ukusetshenziswa kwawo akukhuthazwa.
Uma umuntu onesifo sikashukela edla inani elikhulu lama-carbohydrate, lapho-ke udinga inani elikhulu le-insulin, nayo efaka ingozi, ngakho-ke kufanele futhi ngisho ngokugcinwa okuphoqelekile kokudla okuphansi kwe-carb.
Umthamo owodwa futhi wansuku zonke we-insulin wohlobo 1 nesifo sikashukela esingu-2 - ungabalwa kanjani?
Abantu abanohlobo lokuqala lwesifo sikashukela badinga i-insulin engabonakali njalo. Iziguli ezinesifo sohlobo lwesibili zivame ukusebenzisa amaphilisi akhethekile ukwehlisa amazinga kashukela.
Kepha kwesinye isikhathi umuthi uyehluleka, futhi kufanele ushintshe ingxenye noma i-insulin ngokuphelele.
Ukuphazamiseka kwe-endocrine kuthinta kabi zonke izinhlelo zomzimba womuntu. Ukunciphisa ubungozi bezinkinga kungatholakala ngokugcina amazinga kashukela engaphansi kwemingcele ejwayelekile. Ukuze wenze lokhu, kuyasiza ukwazi ukubala umthamo we-insulin.
Izinhlobo zempilo zesifo sikashukela sikashukela
Kunezikimu ezi-5 zokwelapha i-insulin:
umuthi owodwa wesenzo eside noma esiphakathi,
izindlela ezimbili eziphakathi
i-hormone ephindwe kabili nephakathi nendawo,
kathathu insulin enwetshiwe futhi isinyathelo esisheshayo,
Esimweni sokuqala, umuthi ophuzekwayo uphathwa ngethamo nsuku zonke ekuseni ngaphambi kokudla kwasekuseni.
Ukwelapha ngokwalolu hlelo aluphindeli inqubo yemvelo yokukhiqizwa kwe-insulin. Udinga ukudla kathathu ngosuku: ibhulakufesi elikhanyayo, isidlo sasemini esinempilo, isidlo sasemini esinenhliziyo kanye nesidlo sakusihlwa esincane. Ukwakheka nenani lokudla kuhlobene nezinga lomsebenzi womzimba.
Ngale ndlela yokwelashwa, i-hypoglycemia ivame ukwenzeka imini nobusuku. Uhlobo alulungele uhlobo 1 sikashukela. Iziguli zohlobo lwesibili lwe-pathology kufanele zithathe amaphilisi okwehlisa ushukela ngokuhambisana nemijovo.
Ukwelashwa kwe-insulin kabili ngomuthi ophakathi nendawo kubandakanya ukufaka ukwethulwa komuthi ngaphambi kokudla kwasekuseni nangesikhathi sokudla.
Umthamo wansuku zonke uhlukaniswe kabili ngokwesilinganiso 2 kuya ku-1. Futhi, uhlelo lusengozini ephansi ye-hypoglycemia. Okudidayo ukunamathiselwa kohlelo kuhulumeni nasekudla.
Isiguli kufanele sidle okungenani izikhathi ezingama-4-5. Ukujova kabili kwe-pancreatic hormone ephakathi nendawo futhi emfushane kubhekwa njengokufanele kakhulu ezinganeni nakubantu abadala. Umuthi uphathwa ekuseni nakusihlwa.
Umthamo wansuku zonke uncike ekudleni kokudla, ukusebenza ngokomzimba. Ukhiphe kwesikimu ekudleni okulukhuni: lapho uphambuka esimisweni imizuzu engama-30, kwehla kakhulu i-insulin, kuvela izimpawu ze-hypoglycemia.
Ukuphathwa kwezikhathi ezintathu kwe-insulin ende futhi emfushane kuhlanganisa imijovo ekuseni, ntambama nakusihlwa.
Ngaphambi kwesidlo sasekuseni, isiguli sidinga ukujojwa ngokulungiselela isikhathi eside futhi esifushane, ngaphambi kwasemini - isikhathi esifushane, ngaphambi kokudla kwakusihlwa - isikhathi eside.
Isisekelo-bolus scheme sisondele kakhulu ekukhiqizweni kwemvelo kwe-insulin. Umthamo ophelele uhlukaniswe izingxenye ezimbili: ingxenye yokuqala imfushane, kanti owesibili luhlobo lwesidakamizwa olude.
I-2/3 ye-hormone enwetshiwe ilawulwa ekuseni nantambama, 1/3 kusihlwa. Ngenxa yokusebenzisa imithamo emincane, ubungozi be-hypoglycemia bukhulu.
Iyunithi 1 le-insulin lehlisa kangakanani ushukela wegazi?
Odokotela bathole ukuthi iyunithi ye-insulin inciphisa i-glycemia ngo-2 mmol / L. Inani litholwe ngocwaningo futhi lilinganiswa.
Isibonelo, kwezinye isifo sikashukela, iyunithi yesidakamizwa inganciphisa ushukela ngama-mmol / L ambalwa. Okuningi kuncike eminyakeni yobudala, isisindo, ukudla, ukusebenza komzimba kwesiguli, umuthi osetshenziswayo.
Isibonelo, ezinganeni, abesilisa nabesifazane abanciphile abavezwa ukuzikhandla okukhulu ngokomzimba, umuthi unomphumela omkhulu. Imithi ihlukile emandleni: i-Ultid-iDemo Apidra, iNovoRapid neHumalog zinamandla izikhathi eziyi-1.7 kune-Actrapid emfushane.
Uhlobo lwesifo nalo luyathinta. Ebantwini abangathembela i-insulin, iyunithi yama-hormone iyakwazi ukwehlisa ushukela kakhulu kuneziguli ezinohlobo lwe-insulin oludinga i-insulin. Lokhu kungenxa yokuthi kubantu abanohlobo lwesibili sikashukela, i-pancreas ikhiqiza i-insulin ngemali encane.
Ungasibala kanjani isilinganiso somjovo we-insulin yesifo sikashukela?
Ama-diabetes kumele agcine izinga likashukela esifundeni se-4.6-5.2 mmol / L. Ngakho-ke, udinga ukwazi ukuthola umthamo we-insulin yokujova.
Izici ezilandelayo zithonya ukubala:
ukuba khona kwezinkinga (isifo sikashukela polyneuropathy, ukwehluleka kwezinso),
ukuthatha izingxenye ezengeziwe zokunciphisa ushukela.
Ukubalwa komthamo wohlobo 1 sikashukela
Ngale ndlela yalesi sifo, i-insulin ayenziwanga yi-pancreas. Ngakho-ke, umthamo wansuku zonke ojwayelekile uyanconywa ukuba uhlukaniswe phakathi kwezidakamizwa ezinemiphumela emide (40-50%) nemiphumela emifushane (50-60%).
Inani elilinganiselwe le-insulin libalwa ngokuya ngesisindo somzimba futhi kuvezwa amayunithi (UNITS). Uma kukhona amakhilogremu angeziwe, khona-ke i-coefficient iyancishiswa, futhi uma kunokuntuleka kwesisindo - kukhuphuke ngo-0,1.
Imfuneko yansuku zonke ye-insulin inikezwe ngezansi:
kulabo abasanda kutholwa ukuthi banesifo sikashukela, okujwayelekile ngu-0.4-0.5 U / kg,
ngokugula isikhathi esingaphezu konyaka ngesinxephezelo esihle - 0,6 PIECES / kg,
kubantu abanesifo isikhathi esingaphezu konyaka nangokunxephezela okungazinzile - 0,7 PIECES / kg,
esimweni se-ketoacidosis - 0,9 PIECES / kg,
ekunciphiseni - 0,8 PIERES / kg.
Ukubalwa komdosi kwesifo sikashukela sohlobo 2
Thayipha 2 isifo sikashukela sinwebele i-insulin.
Umuthi obamba amafushane uxhunyiwe lapho ama-pancreas esephele ngokuphelele.
Kubantu abanenkinga entsha ye-endocrinological, umthamo wokuqala wesidakamizwa ngu-0.5 U / kg. Ngaphezu kwalokho, ukulungiswa kwenziwa izinsuku ezimbili.
Odokotela batusa ukuthi kuphathwe i-hormone ku-0,4 U / kg ekuxolelweni. Uma umuntu esenesikhathi eside ehlushwa yisifo sikashukela, khona-ke isilinganiso esifanele somuthi kuye ngu-0,7 U / kg.
Ukukhetha imithamo yengane nengane eyeve eshumini nambili
Ezinganeni ezithola i-hyperglycemia engapheli okokuqala, ama-endocrinologists anquma amayunithi we-0.5 / kg ngosuku.
Endabeni yokubola kanye nokuntuleka kokukhululwa kwehomoni ngamanyikwe, kunqunywe u-0.7-0.8 U / kg. Ngokunxeshezelwa okuqhubekayo, kukhona ukwehla kwezidingo ze-insulin ukuya ku-0,4-0,5 U / kg.
Ukubalwa komthamo wokulungiselela kwe-insulin kwabesifazane abakhulelwe
Ukuthola umthamo ofanele ngowesifazane okhulelwe kubalulekile hhayi kowesifazane uqobo, kodwa nasenganeni yakhe. Emavikini okuqala ayi-13, kunconyelwa ukuthi kufakwe u-0.6 U / kg, kusuka ku-14 kuye ku-26 - 0,7 U / kg, kusuka kuma-27 kuye ku-40 - 80 U / kg.
Iningi lomthamo wansuku zonke kufanele uphathwe ngaphambi kokudla kwasekuseni, futhi okunye - kusihlwa.
Uma ukulethwa kuhlelwa ukuthi kwenziwe kusetshenziswa isigaba se-cesarean, khona-ke imijovo ye-insulin ayenziwanga ngosuku lokuhlinzwa.
Kunzima ukuzikhethela ngokwakho. Ngakho-ke, kungcono ukuthi udokotela akwenze lokhu esibhedlela.
Ithebula lezibonelo zokudalwa okufanele kwemijovo
Ukuze uqonde ngokucace ukuthi ubala ngokunembile kangakanani umthamo we-insulin, ithebula elingezansi libonisa izibonelo:
Izici zobuntu Umthamo ofanele
Abesilisa abangama-70 kg abanesifo sikashukela sohlobo 1, abaneminyaka engu-6,5 ubudala, banciphile, banxeshezelwe kahle Isidingo sansuku zonke = amayunithi angu-0,6 x 70 kg = amayunithi angama-42 i-insulin enwetshiwe 50% wamayunithi angama-42 = amayunithi angama-20 (amayunithi ayi-12 ngaphambi kokudla kwasekuseni no-8 ebusuku)
ukulungiswa okufushane = ama-22 PIECES (amayunithi angu-8-10 ekuseni, ngo-6: 6 ntambama, ngo-6 - ngaphambi kokudla)
Owesilisa abangamakhilogremu angama-120, thayipha isifo sikashukela esingu-1 izinyanga eziyi-8 Isidingo sansuku zonke = amayunithi angu-0,6 x 120 kg = amayunithi angama-72 i-insulin enwetshiwe 50% wamayunithi angama-72 = amayunithi angama-36 (amayunithi angama-20 ngaphambi kokudla kwasekuseni nango-16 ebusuku)
Ukulungiselela iDemo = Amapayipi angama-36 (amayunithi ayi-16 ekuseni, ayi-10 ekudleni kwasemini, ayi-10 ngaphambi kokudla kwesidlo sakusihlwa)
Owesifazane ongamakhilogremu angama-60 kutholakale ukuthi unesifo sikashukela sohlobo 2 esingaphansi konyaka edlule Isidingo sansuku zonke = 0,4 IZINHLOBO x 60 kg = IZIMBANGELA ze-insulin ezinwetshiwe (amayunithi ayi-14 ekuseni no-10 kusihlwa)
Umfana oneminyaka eyi-12, isisindo esingu-37 kg, wagula muva nje, isinxephezelo esizinzile Isidingo sansuku zonke = 0.4 IU x 37 kg = 14 IU yesidakamizwa eseluliwe (amayunithi angu-9 ngaphambi kokudla kwasekuseni no-5 ngaphambi kokudla kwakusihlwa)
Ikhulelwe, amasonto ayi-10, isisindo esingu-61 kg Isidingo sansuku zonke = 0.6 x 61 kg = amayunithi angama-36 we-insulin enwetshiwe (amayunithi angama-20 ekuseni no-16 kusihlwa)
Unganquma kanjani ukuthi umjovo ngaphambi kwesikhathi esingakanani?
Kuthatha isikhathi esingakanani ukujova i-insulin kuya ngohlobo lomuthi. Isibonelo, imithi ye-Ultra-iDemo-ebambekayo iqala ukwehlisa ushukela ngemuva kwemizuzu eyi-10.
Ngakho-ke, umjovo kufanele wenziwe imizuzu eyi-10-12 ngaphambi kokudla. I-insulin emfushane isetshenziswa imizuzu engama-45 ngaphambi kokudla.
Isenzo somenzeli isikhathi eside sikhula kancane: kufakwa ihora ngaphambi kokudla kwasekuseni noma isidlo sakusihlwa. Uma ungagcini isikhathi esinqunyiwe, khona-ke i-hypoglycemia ingaqala. Ukumisa ukuhlaselwa, udinga ukudla okuthile okumnandi.
Umzimba womuntu ngamunye uhlukile futhi ubona i-insulin ngokwehlukile. Ngakho-ke, kungcono ukunquma isikhathi sakho sokuphumula phakathi kokujova nokudla ukudla.
Kubalulekile ukwazi! Ngokuhamba kwesikhathi, izinkinga ezinamazinga kashukela kungaholela ekutheni kube nezixuku zonke zezifo, njengezinkinga ngombono, isikhumba nezinwele, izilonda, ukuhlukumezeka kanye nokulimala komdlavuza! Abantu bafundise okuhlangenwe nakho okumunyu ukuguqula amazinga abo kashukela ajabulele ...
Mayelana nemithetho yokubala isilinganiso esisodwa sansulin se-insulin yesifo sikashukela:
Ngakho-ke, abanesifo sikashukela badinga ukwazi ukubala kahle inani le-insulin elungiselelwe ukuze uzizwe kahle futhi uvikele ukuthuthukiswa kwezinkinga zesifo.
Isidingo saleli hormone sincike kusisindo, iminyaka, ubude kanye nobunzima be-pathology. Abesilisa nabesifazane abadala akufanele bafake ngaphezu kwe-1 U / kg ngosuku, nezingane - 0,4-0.8 U / kg.
I-algorithm yokuthola isilinganiso se-insulin sohlobo 1 sikashukela
I-glucose ephezulu egazini ithinta kabi wonke amasistimu womzimba. Kubonakala ngohlobo lwesifo sikashukela sohlobo lwe-1-2. Ushukela ukhuphuka ngenxa yokukhiqizwa okunganele kwe-hormone ngamanyikwe noma ukumuncwa kwawo kabi. Uma isifo sikashukela singanxephezeli, khona-ke umuntu uzobhekana nemiphumela emibi (i-hyperglycemic coma, ukufa).
Isisekelo sokwelashwa ukwethulwa kwe-insulin yokufakelwa yokuvezwa okufushane nokude. Ukufakwa kuyadingeka ikakhulu kubantu abanesifo sohlobo 1 (okuncike kuma-insulin) nohlobo lwesibili olunzima (olungathembeli kwe-insulin). Tshela udokotela wakho ukuthi ungabala kanjani i-insulin, ngemuva kokuthola imiphumela yokuhlolwa.
Ukubalwa kwenani elidingekayo le-insulin esebenza isikhathi eside
Imvamisa, ama-pancreas afihla i-insulin ubusuku nemini, cishe iyunithi elilodwa ngehora. Lokhu kubizwa ngokuthi yi-basal insulin. Ngosizo lwayo, ushukela wegazi ugcinwa ebusuku nasesiswini esingenalutho. Ukulingisa ukukhiqizwa kwe-insulin kwangemuva, kusetshenziswa i-hormone esezingeni eliphakathi nendawo nelesikhathi eside.
Ezigulini ezinesifo sikashukela sohlobo 1, le insulin ayanele, zidinga imijovo yezidakamizwa ezisebenza ngokushesha okungenani kathathu ngosuku, ngaphambi kokudla. Kepha ngesifo sohlobo 2, imjovo eyodwa noma emibili ye-insulin ende imvamisa yanele, ngoba inani elithile le-hormone litholwa ngamanyikwe ngaphezu kwalokho.
Ukubalwa komthamo we-insulin osebenza isikhathi eside kwenziwa kuqala, ngoba ngaphandle kokuqinisekisa ngokugcwele izidingo eziyisisekelo zomzimba, akunakwenzeka ukukhetha umthamo ofanele wokulungiselela okufushane, futhi ngemuva kokudlulela ngezikhathi ezithile kushukela kuzokwenzeka.
I-algorithm yokuthola isilinganiso se-insulin ngosuku:
Sinquma isisindo sesiguli.
Siphinda isisindo ngesici esingu-0,3 kuya ku-0,5 sikashukela sohlobo 2, uma amanyikwe esakwazi ukufaka insulin.
Sisebenzisa i-coefflication engu-0,5 yohlobo lwe-1 yesifo sikashukela ekuqaleni kwesifo, kanye no-0,7 - ngemuva kweminyaka eyi-10-15 kusukela ekuqaleni kwalesi sifo.
Sithatha u-30% womthamo owutholile (imvamisa ukuya kuma-yunithi ayi-14) bese siwasabalalisa ngemijovo emi-2 - ekuseni nakusihlwa.
Sihlola umthamo wezinsuku ezi-3: okokuqala weqa ibhulakufesi, ekudleni kwasemini kwesibili, ngolwesithathu - isidlo sakusihlwa. Ngezikhathi zendlala, izinga likashukela kufanele lihlale liseduze nokujwayelekile.
Uma sisebenzisa i-NPH-insulin, sibheka i-glycemia ngaphambi kokudla kwakusihlwa: ngalesi sikhathi, ushukela ungancishiswa ngenxa yokuphakama komuthi.
Ngokusekelwe kudatha etholakele, silungisa ukubalwa komthamo wokuqala: sinciphisa noma sikhuphuka ngamayunithi ama-2, kuze kube yilapho i-glycemia ijwayelekile.
Umthamo ofanele we-hormone uhlaziywa ngalezi zindlela ezilandelayo:
Akudingeki imijovo emi-2 ukusekela i-glycemia ejwayelekile yokuzila ngosuku
ayikho i-hypoglycemia yasebusuku (ukukalwa kwenziwa ebusuku ngo-3 o'clock),
ngaphambi kokudla, izinga likashukela liseduze nelitshe,
umthamo we-insulin ende awudluli isigamu senani eliphelele lomuthi, imvamisa usuka ku-30%.
Isidingo se-insulin efushane
Ukubala i-insulin emfushane, kusetshenziswa umqondo okhethekile - iyunithi lesinkwa. Ilingana nama-gramu ayi-12 ama-carbohydrate. I-XE eyodwa imayelana nocezu lwesinkwa, uhhafu we-bun, uhhafu wengxenye yepasta. Ukuthola ukuthi mangaki amayunithi esinkwa epuletini, ungasebenzisa izikali namatafula akhethekile abanesifo sikashukela, esibonisa inani le-XE kuma-100 g wemikhiqizo ehlukile.
Ngokuhamba kwesikhathi, iziguli ezinesifo sikashukela ziyema ukudinga isisindo sokudla, futhi zifunde ukuthola okuqukethwe ama-carbohydrate akulo. Njengomthetho, leli nani elilinganiselwe lanele ukubala umthamo we-insulin futhi uzuze i-Normoglycemia.
I-algorithm yesilinganiso se-insulin esifushane se-algorithm:
Sihlehlisela ingxenye yokudla, siyilinganise, sinqume inani le-XE kuyo.
Sibala umthamo odingekayo we-insulin: siphindaphindeka i-XE ngokwesilinganiso se-insulin ekhiqizwa kumuntu onempilo ngesikhathi esithile sosuku (bheka ithebula elingezansi).
Sethula isidakamizwa. Isenzo esifushane - isigamu sehora ngaphambi kokudla, i-ultrashort - ngaphambi nje noma ngokushesha ngemuva kokudla.
Ngemuva kwamahora ama-2, sikala ushukela wegazi, ngalesi sikhathi kufanele kube yinto evamile.
Uma kunesidingo, lungisa umthamo: ukunciphisa ushukela nge-2 mmol / l, kuyadingeka iyunithi eyodwa ye-insulin.
Ukudla Amayunithi we-insulin we-XE
Isidlo sasemini 1-1,2
Ukudla kwakusihlwa 1,1-1,3
Ukwenza lula ukubalwa kwe-insulin, idayari yokondleka izosiza, ekhombisa i-glycemia ngaphambi nangemva kokudla, inani le-XE elichithwayo, umthamo nohlobo lomuthi olungiselelwe. Kuzoba lula ukukhetha umthamo uma udla uhlobo olufanayo okokuqala, kudla cishe izingxenye ezifanayo zama-carbohydrate namaprotheni ngasikhathi. Ungafunda i-XE bese ugcine idayari online noma ezinhlelweni ezikhethekile zezingcingo.
Ama-insulin therapy regimens
Izici zokubala okufanele
Ngaphandle kokufunda ama-algorithms wokubala akhethekile, kusongela impilo ukukhetha inani le-insulini lomjovo, ngoba kungalindelwa umthamo obulalayo kumuntu.
Umthamo obalwe ngokungalungile we-hormone uzokwehlisa ushukela wegazi kangangokuba isiguli singalahlekelwa ingqondo futhi siwele ku-hypoglycemic coma.
Ukuvimbela imiphumela, isiguli sinconywa ukuthenga i-glucometer yokuqapha okuqhubekayo kwamazinga kashukela.
Bala ngokunembile inani le-hormone ngenxa yezeluleko ezilandelayo:
Thenga izikali ezikhethekile zokulinganisa izingxenye. Kufanele basebenzise isisindo phansi ezingxenyeni zegamu.
Qopha inani lamaprotheni aqediwe, amafutha, ama-carbohydrate bese uzama ukuwaphuza ngokulinganayo zonke izinsuku.
Yenza uchungechunge lwezivivinyo lwamasonto onke usebenzisa i-glucometer. Sekukonke, udinga ukwenza izilinganiso ze-10-15 ngosuku ngaphambi nangemva kokudla. Imiphumela izokuvumela ukubala ngokucophelela umthamo futhi uqiniseke ngokunemba kohlelo lomjovo olukhethiwe.
Inani le-insulin kushukela likhethwe ngokuya nge-carbohydrate coeffnty. Kuyinhlanganisela yama-nuances amabili abalulekile:
Ingakanani 1 iyunithi (iyunithi) lama-carbohydrate asetshenziswa isembozo
Liyini izinga lokunciphisa ushukela ngemuva kokujova yunithi engu-1 ye-insulin.
Kuyisiko ukubala izinqubo eziveziwe ngokomthetho. Lokhu kungenxa yezimpawu zomzimba ngamunye. Ukuhlolwa kwenziwa ngezigaba:
thatha i-insulin okungcono isigamu sehora ngaphambi kokudla,
ngaphambi kokudla, kala ushukela we-glucose,
emva komjovo nokuphela kokudla uthathe izilinganiso njalo ngehora,
ukugxila emiphumeleni, engeza noma wehlise umthamo ngamayunithi ama-1-2 ukuthola isinxephezelo esigcwele,
ukubalwa okuyikho komthamo we-insulin kuzothuthukisa ushukela. Umthamo okhethiwe kahle urekhodwa futhi usetshenziswe kwenye inkambo yokwelashwa kwe-insulin.
Umthamo ubalwa, noma ngabe uluhlobo luni lwesifo sikashukela, ngokususelwa kulezo zinto:
Isikhathi inkambo yalesi sifo. Uma isiguli sinesifo sikashukela iminyaka eminingi, khona-ke isilinganiso esikhulu kuphela sinciphisa ushukela.
Ukuthuthukiswa kokuhluleka kwezinso noma kwesibindi. Ukuba khona kwezinkinga ngezitho zangaphakathi kudinga ukulungiswa kwamthamo kwe-insulin phansi.
Isisindo esiningi. Isibalo siqala ngokwandisa inani lamayunithi omuthi ngesisindo somzimba, ngakho-ke iziguli ezinenkinga yokukhuluphala zizodinga umuthi omningi kunabantu abancanyana.
Ukusetshenziswa kwezidakamizwa zesithathu noma ze-antipyretic. Imithi ingakhuthaza ukuthathwa kwe-insulin noma yehlise ijubane, ngakho-ke ukuhlanganiswa kwemithi nokwelashwa kwe-insulin kuzodinga ukubonisana nodokotela we-endocrinologist.
Kungcono uchwepheshe ukuthi akhethe amafomula nomthamo. Uzohlola ukwelashwa kwe-carbohydrate kwesiguli futhi, kuye ngeminyaka yakhe, isisindo, kanye nokuba khona kwezinye izifo nokuphuza umuthi, uzokwenza irejimeni yokwelashwa.
Ukubalwa kanye namasu wokulawula i-insulin
Ukudosa nokuhambisa i-insulin ulwazi olubalulekile kunoma yisiphi isifo sikashukela. Ngokuya ngohlobo lwesifo, ushintsho oluncane ekubaleni kungenzeka:
Ngohlobo lwesifo sikashukela sohlobo loku-1, amanyikwe ayeka ngokuphelele ukukhiqiza i-insulin. Isiguli kufanele sifake imijovo ye-hormone yesenzo esifushane nesikhathi eside. Kulokhu, inani eliphelele lama-UNITS avumelekile e-insulin ngosuku athathwa futhi ahlukaniswe ngo-2. Uhlobo olude lwe-hormone lujovwe amahlandla ama-2 ngosuku, futhi elifushane okungenani amahlandla ama-3 ngaphambi kokudla.
Kuhlobo 2 sikashukela i-mellitus, ukwelashwa kwe-insulin kuyadingeka uma kwenzeka isifo esinzima noma uma ukwelashwa kwezidakamizwa kwehluleka. Ukwelashwa, i-insulin esebenza isikhathi eside isetshenziswa izikhathi ezi-2 ngosuku. Umthamo wesifo sikashukela sohlobo 2 ngokuvamile awudluli amayunithi ayi-12 ngasikhathi. Ihomoni ebamba amafishane isetshenziswa ngokuncipha okuphelele kwama-pancreas.
Ngemuva kokwenza zonke izibalo, kuyadingeka ukuthola ukuthi iyiphi inqubo yokuphatha i-insulin ekhona:
geza izandla zakho kahle
gxilisa ukakhokho webhodlela lomuthi,
ukudonsa umoya kwisirinji kulingana nenani le-insulin elimele
faka leli bhodlela phezu kwefulethi bese ufaka inalithi ngaphakathi kukakhokho,
khipha umoya kwisirinji, uphendule ibhodlela phansi uthathe umuthi,
kwisirinji kufanele kube amayunithi angama-2-3 ngaphezulu kwenani elifunwayo le-insulin,
susa isirinji bese ukhipha umoya osele kuwo, ngenkathi ulungisa umthamo,
sansa indawo yomjovo,
hlaba umuthi ngokungabonakali. Uma umthamo mkhulu, khona-ke kuyi-intramuscularly.
sansa isirinji nendawo yomjovo futhi.
Utshwala busetshenziswa njenge-antiseptic. Sula yonke into ngocezu lukotini noma ngesikotini sikotini. Ukuze uphinde uqede kangcono, umjovo welulekwa esiswini. Ngezikhathi ezithile, indawo yomjovo ingashintshwa ehlombe nasethangeni.
Iyunithi elilodwa le-insulin lehlisa ushukela malini?
Ngokwesilinganiso, iyunithi eli-1 le-insulin lehlisa ukugcwala kwe-glucose ngo-2 mmol / L. Inani liqinisekiswa ngokuhlolwa. Kwezinye iziguli, ushukela wehla isikhathi esingu-1 ngama-2 amayunithi, bese kuba ngu-3-4, ngakho-ke kunconywa ukuthi kuqashwe njalo ukuqaphela izinga le-glycemia nokwazisa udokotela ohambayo ngalo lonke ushintsho.
Ukusetshenziswa kwe-insulin esebenza isikhathi eside kwenza ama-pancreas abonakale esebenza. Isingeniso senzeka isigamu sehora ngaphambi kokudla kokuqala nokugcina. Ihormone yesenzo esifushane ne-ultrashort isetshenziswa ngaphambi kokudla. Inani lamayunithi kuleli cala liyahlukahluka lisuka ku-14 liye ku-28. Izici ezahlukahlukene (ubudala, ezinye izifo nemithi, isisindo, izinga likashukela) zithinta umthamo.
Ungawubala kanjani kahle umthamo we-insulin: izinhlobo zokwelashwa kwe-insulin, amaphutha ajwayelekile eziguli
Lapho bethola isifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo 2, iziguli eziningi zikhathazeka ngokuthi zenza kanjani imijovo ye-insulin nsuku zonke, nokuthi ungayikhetha kanjani umthamo ofanele we-hormone. Izinga elijwayelekile elivezwa yi-endocrinologist kaningi lidinga ukulungiswa ngokuya ngezinto eziningi.
Kubalulekile ukuqonda ukuthi ubala kanjani umthamo we-insulin ubheka izinga ushukela, ukuguquguquka kwezinsuku usuku lonke. Izinga lesinxephezelo se-endocrine pathology ngesinye isici esibucayi esithinta inhlala-kahle nokuqina kokuqina kweglucose. Kuyasiza ukuthi abantu abanesifo sikashukela bahlole ulwazi ngama-nuances we-insulin therapy kanye nokukhethwa komthamo ofanele we-hormone ebalulekile.
Isisekelo somzimba sokusetshenziswa kwe-insulin kushukela
Lapho ubala umthamo owodwa nowansuku zonke, ukhetha umuthi ofanele, udinga ukwazi ukuthi ukukhiqizwa kwe-insulin kungaphansi kwemigqi yansuku zonke, kuya ngokudla kokudla.
I-basal kanye ne-bolus secretion iyahlukahluka ngokuya ngezinto ezahlukahlukene: ukubulawa yindlala, ukuhlinzwa, ezinye izizathu ezithinta ukukhiqizwa kwama-hormone.
Udokotela we-endocrinologist kufanele achazele isiguli wonke ama-nuances ahlobene nokudla komlawuli ngendlela yokulimala kanye nokukhiqizwa kwe-hormone ngohlobo 2 sikashukela.
Izigaba zokuvikelwa kwe-insulin:
bolus. Kuwo wonke ama-10 g wama-carbohydrate atholwe ngokudla, udinga iyunithi elilodwa noma amabili. Isikhombi sibalulekile ukucacisa inani lamahomoni asebenza ngokufishane (imvamisa ejwayelekile ekudleni ngakunye isukela kumayunithi ama-1 kuye kwayi-8). Isibalo esiphelele (amayunithi angama-24 noma ngaphezulu) sibalulekile ekubaleni isilinganiso sansuku zonke semithi elwa nokusebenza isikhathi eside ye-antidiabetes. Ngokuphikisana nesizinda sedlanzana lokudla, ukugcwala ngokweqile nangokomzwelo, ukubulawa yindlala, ukulimala, esikhathini sokusebenza, inkomba incipha amahlandla ama-2,
basal. Lolu hlobo secretion lwe-insulin kubalulekile ukulondolozela ukuqina okuneglucose kwegazi, inkambo efanelekile yezinqubo ze-metabolic.
Izinhlobo zokwelapha nge-insulin:
kuhlangene, inketho yendabuko. Emini, isiguli sithola u-70% wosuku nosuku no-30% we-insulin "emfishane". Le ndlela ilungele iziguli ezingazifundanga, asebekhulile, ebuntwaneni. Qiniseka ukuthi usebenzisa ukudla okuvame ukuvela ukuze uvikele i-hypoglycemia. Kwanele ukulawula izinga likashukela kaningi kunendlela yokuqina ye-insulin. Kuyinto elula ukuthi iziguli zinikeze ingxube eyenziwe ngomumo eyenziwe nge-pancreatic hormone. Qiniseka ukuthi ubheka isisindo nesiguli nesifo sikashukela,
kuqinisiwe, inketho yeziguli eziqondisiwe. Izinga eliphakeme lesinxephezelo se-endocrine pathology, impilo enhle, ukuntuleka kokudla okuqinile, ingozi encishisiwe yezinkinga, ushukela wegazi ozinzile. Okubi kwendlela yilezi: isilinganiso esiyisibopho sokuhlushwa kwe-glucose ngosuku olwandulela nangemva kokudla, kusihlwa nangesikhathi sokulala (izikhathi ezingama-7-8), ukuqeqeshwa okuhle kanye nokukhuthaza okuphezulu kwesifo sikashukela. Ingxenye ye-insulin ehlala isikhathi eside isukela ku-40 iye ku-50%, isiguli sithola izingxenye ezimbili kwezintathu zesilinganiso esijwayelekile kuze kube amahora ayi-15-16, ingxenye yesithathu yesamba kusihlwa. Ingxenye ye "insulin" emfishane usuku lonke: 40% - ngaphambi kokudla kwasekuseni, 30% - ngaphambi nje kokudla kwasemini kanye nokudla kwakusihlwa.
Izinkomba zemijovo ye-insulin:
uhlobo lokuqala lwesifo sikashukela. Ama-pancreas akakhiqizi i-hormone enciphisa ushukela, isiguli asikwazi ukwenza ngaphandle kwemijovo ye-insulin yansuku zonke,
uhlobo lwesibili sikashukela. Emzimbeni, izicubu zomzimba nezicubu ezinamafutha azizwakali esenzweni se-insulin, kubalulekile ukwengeza ukubanjwa kwamathebulethi ngomjovo we-hormone yokugcina. Kubalulekile ukubheka ku-endocrinologist lapho ushukela ubekwa khona nge-insulin ukuze uphendule ngokunembile enjongweni yemijovo. Ukwenqaba imijovo yansuku zonke kuyenza ibe nzima kakhulu inkambo yesifo sikashukela.
Qaphela! Umgomo wokwelapha i-insulin ukulingisa ukugcotshwa okuphezulu kwe-basal hormone, njengasebantwini abaphilile.
Isidingo sehomoni yeDrayivu
Ngemuva kwesibalo se-endocrine pathology ngonyaka wokuqala, isidingo somzimba sokudla i-insulin singancipha okwesikhashana, bese sikhuphuka kancane size sifinyelele ku-0,6 PIECES nge-1 kg yesisindo somzimba wesiguli. Ngokuthuthukiswa kwe-ketoacidosis kanye nokubola kwesifo sikashukela, okujwayelekile kwansuku zonke: amanani aphakathi ukusuka ku-0.7 kuya ku-0,8 PIECES we-hormone ngekhilogremu yesisindo ngasinye.
qiniseka ukuphatha i-insulin enwetshiwe kabili ngosuku (ekuseni, ngaphambi kokudla kwasekuseni, ngaphambi nje kokudla kwakusihlwa noma ngaphambi kokulala). Inani eliphelele lize lifike kuma-50% wesilinganiso esiphelele sehomoni ngosuku olulodwa,
isiguli sithola isigaba se-ultra-esifushane nesifushane sokulawula ngaphambi nje kwasemini, isidlo sasekuseni nesidlo sasebusuku - ukudla okuyinhloko. Ukubala umthamo we-hormone, udinga ukusebenzisa itafula le-XE.
Isidingo esifanele sama-carbohydrate sosuku olulodwa sihambelana nokudla okuphelele kwekhalori: 70-300 g yama-carbohydrate noma 7-30 XE.
Ekudleni ngakunye, odokotela batusa inani elithile lamayunithi esinkwa: ibhulakufesi - kusuka ku-4 kuye ku-8, isidlo sasemini - kusuka 2 kuya ku-4, isidlo sakusihlwa - kusuka 2 kuya ku-4.
Amayunithi esinkwa angama-3-4 asele kufanele ahanjiswe ukudla kwasemini, isidlo santambama nesidlo sakusihlwa kusihlwa. Ezimweni eziningi, ngokudla okwengeziwe, i-insulin ayidingeki.
Isidingo sehomoni-isabelomali sesenzo esifushane noma se-ultrashort sisezingeni lamayunithi ayi-14- 28. Kubalulekile ukusebenzisa imitha usuku lonke ukuthola izinga elifanele le-insulin, kuya ngokufundwa kweglucose.
Impilo yesifo sikashukela yenziwa lula ngokufaka esikhundleni imitha yoshukela yendabuko ngemitha yeshukela likashukela yesimanje.
Idivayisi ikuvumela ukuba usheshe, ngaphandle kobuhlungu futhi unikeze umunwe, uthole izinga likashukela ukubala umthamo ofanele we-pancreatic hormone.
Kunodosi olungalungile oluyingozi lwe-insulin
Isimo sempilo esijwayelekile, amathuba okuba nezinkinga, kanye nokulawulwa kwesinxephezelo sesinxephezelo sikashukela kuncike ngqo kuzinga le-hormone elihanjiswa ngalo. Ngokulashwa okufanele kwe-insulin, amanani kashukela empeleni awafani namazinga kashukela kubantu abangazi ukuthi siyini isifo sikashukela.
Ezimweni eziningi, inkinga yenzeka ezigulini ezingenalwazi. Kubalulekile ukuqaphela umthamo ophansi kakhulu noma ophakeme we-hormone yokubeka ngesikhathi. Ukwehla okukhulu ushukela noma i-hypoglycemia kungaholela ekhefini elisongela impilo. Ubuthakathaka, isicanucanu, ukuhlanza, ukuncipha kwezwi lemisipha nengcindezi, nokugabha kuyizimpawu zokuncipha okukhulu kwamazinga kashukela.
Kubalulekile ukuthi usheshe udle ucezu ushukela (wemvelo, hhayi obambele), uswidi noma amakhukhi ukuze wenze izinkomba zijwayelekile. Isifo sikashukela kufanele ngaso sonke isikhathi siphathe ukudla okunama-carbohydrate amaningi ukulungisa ngokushesha amanani kashukela lapho kukhula i-hypoglycemia.
Ukubalwa nemithetho yemithamo
Udokotela we-endocrinologist ekwamukeleni kufanele achaze isiguli ukuthi yisiphi isimo sansuku zonke samahomoni esinikeza umsebenzi ozinzile obalulekile, izinkomba zikashukela ezifanele nempilo enhle. Izinga elifanele le-insulin liyisihluthulelo sokwehlisa ubungozi bezinkinga ezinkulu.
Ngohlobo lwesifo sikashukela sohlobo 1, kubalulekile ukulungisa inani lamahomoni alawulwa ngokususelwa esilinganisweni: ngesilinganiso esilele emzimbeni, amandla akhuphukayo ngo-0,1, ngokuqongelelwa kwamaphawundi angeziwe kuyancipha ngenkomba efanayo.
Ukukhethwa komthamo we-insulin kubhekwa izinkomba ezithile (ezijwayelekile nge-1 kg yesisindo somzimba):
i-trimester yesithathu yokukhulelwa, ukuthomba - 1 iyunithi,
ukuthuthukiswa kwe-ketoacidosis - 0,9 PIECES,
isifo sikashukela esigabeni sokubuyiswa kwemali - i-0.8 PIECES,
inkambo ye-endocrine pathology yonyaka noma ngaphezulu (isinxephezelo esinganele) - 0,7 PIERES,
i-pathology eyembulwe ngonyaka owedlule noma ngaphezulu, izinga lesinxephezelo liphezulu - amayunithi angu-0.6,
isifo sikashukela esincike ku-insulin satholakala okokuqala - sisuka ku-0,4 saya ku-0,5.
Uma isiguli sithola i-insulin engaphezu kwe-1 i-insulin ngekhilogremu ngayinye yesisindo, khona-ke odokotela bakhombisa isiguli ukweqisa kwe-hormone-isabelomali.
Ukulawulwa isikhathi eside kwemithamo ephezulu ye-insulin kungaholela ku-hypoglycemia (ukwehla okubucayi kwamazinga kashukela).
Ukuthuthuka okuyingozi kwemicimbi ngaphandle kokulungiswa kwezinga le-insulin ukwenzeka kwe-hypoglycemic coma nokufa uma ungakutholi ukunakekelwa kwezokwelapha okufanele futhi okufika ngesikhathi.
Izinkinga Zokwelapha Nge-Insulin
Uma kutholakala isifo sikashukela futhi kutholakala izinkomba zokujova kwe-insulin, udokotela obambele izinhlungu kufanele akhethe inani elifanele le-hormone losuku olulodwa. Izici eziningi zidinga ukucatshangelwa: izinga loshukela, isilinganiso sesinxephezelo sikashukela, ukushintshashintsha kwamanani kashukela, iminyaka yesiguli.
Enye yezinkinga zokwelashwa kwe-insulin izinga eliphansi lesiguli. Amaphuzu abalulekile: ukuqonda ngengozi yezinkinga uma wephula imithetho, ukuzimisela ukulandela izincomo, gcina ukudla.
Akuzona zonke iziguli ezikubona kunesidingo ukukala isilinganiso ushukela, ikakhulukazi uma usebenzisa i-glucometer yendabuko (ngokubhoboza ngomunwe).
Idivaysi yesimanje (uhlobo olungavikelekile lwedivaysi) iyabiza kakhulu, kepha ukusetshenziswa kwentuthuko yakamuva ikuvumela ukuthi ukhohlwe ngama-callus, ubuhlungu kanye nengozi yokutheleleka. Izinhlobo eziningi zamamitha kashukela egazi elihlaselayo anekhompyutha eyakhelwe ngaphakathi nesibonisi lapho kukhonjiswa khona izinkomba.
Kukhona i-caveat: udinga ukufunda ukuphatha amadivaysi anamuhla, iziguli eziningi ezindala ezingakwazi ukukhokhela. Imvamisa, iziguli azifuni ukuthola ulwazi lokulawula okusebenzayo kwezinga lesinxephezelo sikashukela, themba lokuthi "ngokungahleliwe", lidlulisela wonke umthwalo kudokotela.
Enye inkinga: ukungafuni kwesiguli ukugcina idayari enempilo yokudla okubonisa isikhathi sokudla, amazinga kashukela ngaphambi nangemva kokudla, inani lamayunithi we-insulin. Isiguli kufanele siqonde ukuthi ngokudla okuphansi kwe-carb yesifo sikashukela, i-accounting yamayunithi esinkwa, isilinganiso sesinxephezelo sikashukela sikhuphuka kakhulu.
Ukwenza lula ukulinganisa kwenani lama-carbohydrate, iziguli zidinga amatafula we-XE, insulin kanye ne-glycemic index yemikhiqizo. Esigabeni sokuqala, kufanele uhlale ukala imikhiqizo, kepha kancane kancane isiguli siyaqonda ukuthi yiziphi izinto ezithinta kabi ushukela.
Kuyasiza ukucabanga ngokudla kusihlwa, faka amatafula i-XE, i-GI, i-AI, ngosuku olulandelayo, shintsha imenyu ngokunaka izinkomba ze-glucose.
Umqondo obalulekile: abanesifo sikashukela abaningi bakholelwa ukuthi isibopho senkambo ye-endocrine pathology sikhona kudokotela.
Lo mbono ngokuyisisekelo awulungile: uma isiguli sidingida nodokotela ngesikhathi esifanele, siguqula isimo sansuku zonke se-insulin, sibheka i-XE ekudleni, khona-ke imiphumela emihle kakhulu ingatholwa ukuzinzisa izinkomba zikashukela.
Udokotela we-endocrinologist kufanele azi zonke izimo ze-hypoglycemia, ukwephulwa kokudla ngumuntu onesifo sikashukela.
Ukulungiswa okufika ngesikhathi ekudleni kanye nokwejwayelekile kwe-insulin kukuvumela ukuthi ugweme amanani aphansi kashukela, ukushaya kwenhliziyo, unhlangothi, i-hypoglycemic coma.
Ngesikhathi sokwelashwa kwe-insulin, onesifo sikashukela kufanele abonane nodokotela, azi ukubala umthamo ofanele we-insulin. Ngokubambisana kwe-endocrinologist nesiguli kuphela kungatholakala isinxephezelo esihle sikashukela.
Ividiyo - izincomo zendlela yokubala ngokunembile umthamo owodwa we-insulin wabanesifo sikashukela:
Indlela yokubala umthamo we-insulin
Ukubalwa komthamo we-insulin kufanele kwenziwe ngokucophelela, kusetshenziswa ezinye izinhlobo zama-indices. Qiniseka ukuthi wazi isisindo sakho kanye nokudla kwe-carbohydrate ngosuku nasesidlweni esisodwa ukuze ukubala umthamo ofanele.
Inqubo yokubalwa komthamo wehomoni esikhundleni salesi sifo esigulini sohlobo 1 sikashukela
Uma umuntu enesifo sikashukela sohlobo 1, ukubalwa kwe-insulin kwenziwa kuphela uma usebenzisa lonke uhla lwama-indices. Isisindo somzimba somuntu sinquma inani lamayunithi omuthi.
Ungayikhetha kanjani isilinganiso se-insulin esigulini esinesisindo esingajwayelekile? Uma isiguli sinesisindo ngokweqile, inkomba kufanele incishiswe, futhi uma kunokuntuleka kwesisindo, inkomba kufanele inyuswe.
Izinkomba ezilandelayo ziphuma kulokhu:
Amayunithi angama-0.5 / kg esisindo salabo abasanda kutholwa isifo sikashukela sohlobo 1.
Isilinganiso kufanele kube amayunithi angama-0.6 / kg wesisindo sesiguli uma isifo sikashukela satholakala cishe ngonyaka owedlule, kepha zonke izinkomba zezempilo zeziguli zizinzile futhi zinempilo.
Inkomba kufanele ibe amayunithi angama-0.7 / kg wesisindo somuntu ophethwe isifo sikashukela sohlobo 1, kepha izinkomba zakhe zezempilo azinzanga.
Uma kuvela isimo lapho ukubola kubonwa kuhlobo lokuqala lwesifo sikashukela, inani kufanele libe amayunithi angama-0.8 / kg.
Lapho umuntu ekhula ketoacidosis, inkomba ye-insulin kushukela kufanele ibe amayunithi angama-0.9.
Uma isiguli sinesifo sikashukela sokuthomba noma owesifazane ogulayo ku-trimester yesithathu yokukhulelwa, khona-ke ukubalwa kwe-insulin kususelwa enkombeni yeyunithi eyodwa / kg yesisindo.
I-overdose yenzeka ngemuva kokuthatha ngaphezu kwe-1 yunithi / kg yesisindo somuntu. Yize umthamo obulalayo we-insulin womuntu ngamunye uzohluka. Isigaba sokuqala sibonisa inkomba yamayunithi angaphezu kwama-0.5. kodwa-ke ingancishiswa. Le nkathi ibizwa ngokuthi "i-honeymoon" yentuthuko yalesi sifo. Kepha lapho-ke ukuziswa kwe-insulin kuzodingeka kwandiswe.
Lapho kusetshenziswa umuthi osebenza isikhathi eside, kufanele udale ukulingiswa kweqiniso lokuthi i-hormone ikhiqizwa ngokwesimo esanele. Kuzodingeka ukusikaza lesi sidakamizwa kabili ngosuku, futhi ezingxenyeni ezilinganayo ezivela kumthamo wezinto zansuku zonke.
Ungasibala kanjani isilinganiselo se-insulin esisheshayo? Kufanele isetshenziswe ngaphambi kokudla, lapho kubalwa umthamo we-insulin, inkomba ye-XE (amayunithi wesinkwa) asetshenziswa. Ukunquma ukuthi i-carbohydrate engakanani ngosuku edliwayo, udinga ukwazi inani eliphelele lama-kilojoule adliwayo.
Lezi zinkomba zibalulekile ukuze kunqunywe ushukela. Usuku, isiguli sidinga ukudla kusuka kuma-70 kuye kwangama-310 g we-carbohydrate. Leli nani lama-carbohydrate lilingana nenani ukusuka ku-7 kuye ku-31 XE. Kungcono ukuthi ubahlukanise usuku lonke.
Kusekuseni i-4-8 XE isetshenziswa, ntambama 3-4 XE, futhi kusihlwa kuze kube ku-4 XE. Ama-4E ama-XE aphulwe ukudla okuphakathi. Ukukhethwa kwezidakamizwa kuya ngezinkomba ngazinye. Ngokwesimo, umthamo we-insulin wezikhathi ezahlukahlukene zokunqunywa unqunywa.
Izinto ezinesenzo esifushane akufanele ziphiwe amayunithi angaphezu kwangama-28.
Isigaba sokuqala ukujwayezwa kokuzila ukudla kwe-glycemia. Uma isiguli sine-glycemia, nesisu esingenalutho, ngaphezu kwe-7.8 mmol / l kuhlala kulungisiwe, khona-ke ukumisa ukusetshenziswa kwamacwecwe anciphisa izinga likashukela kuzodingeka. Esikhundleni salokho, udinga ukusebenzisa umuthi onomphumela ohlala njalo ongama-0.2 amayunithi / kg ngosuku olulodwa.
Ngemuva kwalokho udinga ukwandisa umthamo ngama-4 amayunithi njalo ezinsukwini ezi-4, noma ungakwenza lokhu njalo ezinsukwini ezimbili. Ukwanda ngamayunithi ama-2. Uma ngesikhathi sokulungiswa kwe-glycemia kule nkathi ngemuva kokubala, umthamo we-insulin uqoqiwe, okungamayunithi angaphezu kwama-30, ngakho-ke kuyadingeka ukwephula umthamo womuthi ngemithamo emibili.
Umthamo wakusihlwa kufanele ube ngaphansi kancane kunasekuseni.
Isigaba sesibili ukwenza ngokwejwayelekile i-postprandial glycemia (ngemuva kokudla). Lapho izinga le-glycemia ngaphambi kokudla lifinyelela enkombeni engaphansi kuka-7.8 mmol / l, udinga ukuqala ukulawula ushukela ngemuva kokudla. Kulokhu, umthamo womuthi onomphumela omfushane uyalungiswa.
Ngemuva kokudla, i-glycemia akufanele ibe ngaphezu kwe-10 mmol / L. Uma i-glycemia ngemuva kokudla ingeqi i-10 mmol / l, khona-ke isiguli siyamelana ne-insulin. Isiguli sivunyelwe ukusebenzisa imishanguzo yethebhulethi eyenzelwe ukunciphisa amazinga kashukela.
Kepha lokhu kungenzeka kuphela lapho izinga eliphezulu le-glycemia lifinyelelwa. Ngaphezu kwalokho, udinga ukuqala ukusebenzisa izizweli.
Lapho izinga likashukela lingaphezu kwe-10 mmol / l, ngemuva kokudla, udinga ukubuyisa uhhafu wawo wonke umthamo wezidakamizwa eziqukethe i-insulin nomphumela owengeziwe, uzibeke esikhundleni sezidakamizwa ezisebenza ngokushesha.
Lezi zibalo zizosiza ukugcina impilo enhle. Kunconywa ukuthenga i-glucometer ukuhlola izinkomba. Zonke izibalo kufanele zibe zinembile impela, ngoba iphutha lingabiza umuntu impilo.
Isiguli ngasinye esinohlobo lwe-1 noma uhlobo lwe-2 yesifo sikashukela, ngaphambi kokubala inani lemithi equkethe i-insulin, kufanele vakashela uchwepheshe wezokwelapha futhi abonane ngokuningiliziwe nodokotela wezokwelapha ngokubala umthamo wezidakamizwa.
Ukubalwa okulungile komthamo we-insulin
Isifo sikashukela i-mellitus yisifo esiyinkimbinkimbi esisongela ngezinkinga zaso. Ukuze uphile ngokugcwele futhi usebenze, umuntu onesifo sikashukela kufanele abheke imodi yokusebenza efanelekile futhi aphumule, anikeze inkomba ye-glycemic yemikhiqizo futhi athathe i-insulin. Yikuphi umthamo we-insulin uwukuthi evamile esimweni esithile, ukuthi ungayenza kanjani kahle Ukukhetha umthamo we-insulin?
Isibalo se-insulin esengeziwe
I-Insulin Engaphezulu Esebenzayo – umuthi onomsebenzi wokwehlisa ushukela wegazi, udinga ukuwuthatha esiswini esingenalutho. Lesi sidakamizwa sinqunyelwe noma ngabe isiguli siyasisebenzisa insulin emfushane. Ukulungiselela isikhathi eside i-insulin kuqala isenzo sabo emahoreni angama-2-2 ngemuva kokuphathwa.
Ukuze ukhethe umthamo ofanele, ngolunye usuku ngaphandle kokudla ibhulakufesi, ukukala izinga loshukela wegazi nge-glucometer, kuthi ngosuku lwesibili, amahora ama-3 emva kokudla kwasekuseni, ulinganise izinga le-glucose. Izinkomba zidinga ukuqhathaniswa. Lapho ubala imithamo yokusetshenziswa kwe-insulin okunwetshiwe Ifomula leForamu:
(mg /% - 150) / 5 = sithola umthamo owodwa we-insulin enwetshiwe
Isibonelo: glycemia 180 mg /%. Ngakho (amayunithi angu-180 - 150) / 5 = 6
Uma ukufundwa kwakho kukhulu kune-216 mg /%, ngo ifomulaForshema kuyadingeka ukuhlukanisa umehluko hhayi ngo-5, kodwa ngo-10.
Isibonelo: glycemia 220 mg /%, ukubalwa ngokuya ngefomula (220-150) / 10 = 7 amayunithi
Ukubalwa komthamo we-insulin emfushane
Insulin amafushane, njenge I-Apidra neHumalog, asize ngokuphumelelayo ukulwa nesifo sikashukela. Ukuthola isidingo sayo kulula kakhulu, ngoba lokhu kuyadingeka ukukala amazinga kashukela egazini njalo. Uma phakathi nosuku kuyinto ejwayelekile futhi ikhuphuka kuphela emva kwesidlo sakusihlwa, lapho-ke udinga ukufaka umjovo we-insulin kusihlwa.
Ukuze ukubala kahle umthamo, udinga ukubheka izimfanelo zokudla okunesiguli, umsebenzi wokuzivocavoca phakathi nosuku, izifo ezihambisanayo futhi udla nemithi.
I-insulin efingqiwe emfishane kufanele ithathwe imizuzu emi-5 ukuya kwengama-15 ngaphambi kokudla, inikezwe ukuthi iHumalog inciphisa ushukela izikhathi ezi-2,5, izinga lomthamo we-Apidra kufanele libe ngu-2/3 wethamo le-insulin emfushane, neNovorapid 0,4 yaleli dosi.
Kumele kuqashelwe ukuthi umthamo wesifo esisanda kutholwa isifo sohlobo lwe-1 ngu-0.5 U / kg, kwesifo esigcina isikhathi esingaphezu konyaka - u-0.6 U / kg, ezimweni ezinzima ze-0.8 U / kg, kanti esesithathu isidina sokukhulelwa 1.0 AMA-PIECES / kg.
Sibala umthamo owuthandayo ngokusho kwifomula: isilinganiso sansuku zonke se-ED * isisindo somzimba / 2
Isibonelo, uma udinga ama-0,6 PIECES we-insulin ngosuku, nesisindo somzimba wakho singama-80 kg, khona-ke ngokwefomula (80 * 0.6) / 2 = 24, lapho-ke udinga ukuthatha amayunithi we-insulin angama-24 phakathi nosuku.
I-Insulin Injection Technique kumele kube okunembile, kungenjalo kungenzeka i-insulin ngokweqile okungahle kube nobuthakathaka, isicanucanu, isiyezi, nokuhlanza.
Ukwelashwa kwe-insulin kuyingxenye ebalulekile yempilo yawo wonke umuntu onesifo sikashukela, ukulandela yonke imithetho nemiyalo kadokotela kuzokuvumela ukwenqaba ukuthatha i-insulin yezokwelapha.
Ungayibala kanjani kahle i-insulin yesiguli enesifo sikashukela (i-Algorithm)
Ukwelashwa kwe-insulin njengamanje ukuphela kwendlela yokwelula impilo yabantu abanesifo sikashukela sohlobo 1 nohlobo olubi lwesifo sikashukela. Ukubalwa okulungile komthamo odingekayo we-insulin kukuvumela ukulingisa kakhulu ukukhiqizwa okungokwemvelo kwaleli hormone kubantu abanempilo.
I-algorithm yokukhethwa komthamo incike kuhlobo lwesidakamizwa esisetshenzisiwe, uhlobo olukhethiwe lwe-insulin therapy, umsoco kanye nezici zomzimba zeziguli ezinesifo sikashukela i-mellitus.
Ukuze ukwazi ukubala umthamo wokuqala, lungisa inani lomuthi ngokuya ngama-carbohydrate esidlweni, uqede i-episodic hyperglycemia iyadingeka kuzo zonke iziguli ezinesifo sikashukela.
Ekugcineni, lolu lwazi luzosiza ukugwema izinkinga eziningi futhi unikeze amashumi eminyaka wempilo enempilo.